June 27, 2014 – democracy for burma
#คำสั่ง #คสช. #77#78 #79 #2557
On June 27, 2014 June 28, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
โดยคำสั่งที่ 77/2557 ให้
– พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
-นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
-นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสั่ง คสช.77/2557 การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
1) ตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล)
ในกระทรวง – พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
2) ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นตำแหน่งข้าราชการอัยการชั้น 8 เทียบเท่าอัยการสูงสุด – อรรถพล ใหญ่สว่าง
กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกฯ ในสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน5ตำแหน่ง (พวกที่หลุดจากตำแหน่ง)
1) ธาริต เพ็งดิษฐ์,
2) ธงทอง จันทรางศุ
3) สุรชัย ศรีสารคาม
4) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
5) สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นางเมธินี เทพมณี ปลัด ICT
นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขา ศอ.บต.
นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ,
คำสั่ง คสช.78/2557 การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
– นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
– พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข
– นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
-นางชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
-นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ Continue reading “#คำสั่ง #คสช. #77#78 #79 #2557” →
#MYANMAR #BURMA #RCSS #မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေး
RCSS မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေး အဖှဲ့၏ အပွညျပွညျဆိုငျရာ မူးယဈဆေးဝါးအလှဲသုံးမှုနှငျ့ တရားမဝငျရောငျးဝယျမှု တိုကျဖကျြရေးနမှေ့ ထုတျပွနျကွညောခကျြ
#MYANMAR #BURMA #အစိုးရစဈတပျ တပျမ ( ၇၇ ) ဗုံးခှဲ ရှာသား #၂ ဦးသဆေုံး
အစိုးရစဈတပျ တပျမ ( ၇၇ ) မှ လှုပျရှားတပျဖှဲ့၏ တောတှငျးရှာဖှလှေုပျရှားစဉျ တောငျယာလုပျသား ၂ ဦးနှငျ့ တိုးမိကာ လကျပဈဗုံးဖွငျ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ တောငျသူ၂ဦး ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးခဲ့ရကွောငျး။
လှနျခဲ့သညျ့ ဇှနျလ ၁၉ ရကျနတှေ့ငျ တပျမ ( ၇၇ ) မှ လှုပျရှားတပျဖှဲ့တဈဖှဲ့သညျ အငျအား ၃၀ ကြျောနှငျ့ အတူ လှယျအံ ၊ကောငျးခါးမှ စဈကွောငျးခြီလာပွီး တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျမြားကို ရှာဖှရော ဝမျနားရှာသို့အရောကျ ပွောငျးဖူးစိုကျခငျး စောငျ့နသေော တောငျယာလုပျကိုငျနသေူ ရှာသား ၂ ဦးကို တိုးမိရာ ၎င်းငျးလှုပျရှားတပျဖှဲ့မှ လကျပဈဗုံးဖွငျ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ရှာသား ၂ ဦး ပှဲခွငျးပွီး သဆေုံးခဲ့ကွောငျး။သဆေုံးသူ ရှာသား ၂ ဦးမှာ လုံးကော အသကျ ( ၄၅ ) နှဈ ၊ လုံးမီး အသကျ ( ၄၄ ) နှဈတို့ဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
တပျမ ၇၇ သညျ အဖှဲ့ ၂ ဖှဲ့ ခှဲကာ ကြောကျမဲမွို့နယျ နှငျ့ နောငျခြိုမွို့နယျ ကွားရှိ ဂုတျထိပျတံတား အနီးအနားဝနျးကငျြတှငျ အခွခေနြကွေောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
တပျမ ၇၇ သညျ ပဲခူးမွို့အခွစေိုကျဖွဈပွီး သြှမျးပွညျတပျမတျောမွောကျပျိုငျးရှိ SSPP/SSA အဖှဲ့ ၊TNLA အဖှဲ့ မြားကို ထိုးစဈဆငျတိုကျခိုကျနသေော တပျဖှဲ့လညျးဖွဈပါတယျ။
#ย้ายใหญ่กระทรวง #ต่างประเทศ #ล้างบางสาย #แม้วเป่า
On June 27, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
= ตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โยกปลัด กต. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ไปโตเกียว
รองปลัดบัวแก้ว นายวิทวัส นายพิริยะ เข็มพล นายมนัสวี ศรีโสดาพล และ นายจักร
มะนิลา: นายธนาธิป อุปัติศฤงค์
ไทเป: นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย
ออสโล: นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี
ปักกิ่ง : นายธีรกุล นิยม
ปราก: นาย ณรงค์ ศศิธร
สิงคโปร์ : นาย บรรณสาน
เม็กซิโก : นายนพปฎล คุณวิบูลย์
นิวยอร์ค : นายวีรชัย พลาศรัย
สวีเดน : นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
เฮก: นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
เวียนนา : นายพิศาล มาณวพัฒน์
ออตตาวา: นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
ลอนดอน: นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง
เวลลิงตัน : นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์
แคนเบอราร์: นายจิระชัย ปั้นกระษิณ
กัวลาลัมเปอร์: นายสุวัฒน์ แก้วสุข
จาการ์ตา : ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ CR. Paisal Puechmongkol
#myanmar #လုံခြုံမှု လုံးဝ မရှိသော နိုင်ငံသား တဦး ဘ၀ အဖြစ် လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်တခ #nay #myo #zin
On June 27, 2014 June 27, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
အများစုပေါင်း နေထိုင်သော ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းများ တွင် နေထိုင်သူများ အတွက် အထူး သံဝေဂယူ သတိပြု ဆင်ခြင် စစ်ဆေး ထိမ်းသိမ်းနေနိုင်ရန် အတွက် လက်တွေ့ဖြစ်စဉ် တခုကို တင်ပြပါသည်။ အများသုံး လှေခါးထစ် အနီး ဖိနပ်ချွတ် တခုတွင် စိတ်ကြွဆေး အချို့အား ကလေးစားစရာ မုန့်ထုပ်အခွံ တခုဖြင့် ထုပ်ကာ စွန့်ပစ်ထားသည်ကို မူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့က သတင်းအရ ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးသွားခြင်း ခံရသော ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ တဦး အကြောင်း။ ထိုနေ့တွင် သူ့အိမ်အတွင်း သမီးငယ်၏ မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပနေချိန် ဧည့်သည်မြောက်များစွာ ရောက်ရှိနေခိုက် အများသုံး လှေခါး အထပ် ဖိနပ်ချွတ်တွင် တွေ့ရှိရသည်ဆိုသော အဆိုပါ စိတ်ကြွ ဆေးပြားကြောင့် ကိုရဲ ဆိုသည့် နိုင်ငံသား တဦးမှာ နှစ်ရှည်ထောင်ဒါဏ်အပြစ်ပေးခံနေရသည်။ အလားတူဖြစ်စဉ်မြောက်များစွာ ကြားသိခဲ့ရပြီး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကော်မီတီမှ ထောင်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးမည်ဆိုသော သတင်းစကားများကိုသာ ကြားသိရပြီး ယနေ့ထိ အင်းစိန်ထောင်တွင်းသို့ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခြင်း မရှိသေးသည့် အတွက် အကျဉ်းသားများမှာ မျှော်လင့်ချက် နှင့် ယုံကြည်ချက်များ ပျောက်ဆုံး နေကြရှာပေသည်။
#CRIME จ. #เลย #ร้อย #ทพ.2106 ร่วมกับ #จนท.สถานีเรือเชียงคาน
ศุกร์ 27/6/57.. ( 18.45 น. จ.เลย )
เมื่อเวลา 15.30 น. ร้อย ทพ.2106 ร่วมกับ จนท.สถานีเรือเชียงคาน / ตำรวจน้ำเชียงคาน ร้อย ตชด.246 กอ.รมน.จังหวัด เลย และ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.เมืองเลย (ฉก.ศรีสองรัก) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 34 แผ่น/เหลี่ยม ไม้เก่า ปริมาตร 0.778 ลบ.ม. ที่บริเวณป่าข้างถนนเส้นทางการเกษตร บ.ปากเนียม – บ.ปากปัด ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
ไม้กำลังเตรียมการลำเลียงส่งขายต่อให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด จึงได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย เพื่อดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับไม้ของกลางได้เก็บรักษาไว้ที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ล.ย.3
#ประกาศ #คสช. #ฉบับที่ #72- #73/2557
ศุกร์ 27/6/57 .. ( 20.05 น. ประกาศ2ฉบับ )
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 72-73/2557
เพื่อนๆ ใช้แว่นขยาย ส่องอ่านดูเองแล้วกันนะครับ
ว่าแต่เค้าประกาศยังอ่ะ ผมก็ ?? ไม่ได้ฟังทีวี.ด้วย CR. CATHAY MEE
#MYANMAR #ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်းခရိုင်မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ #one #stop #service #center
On June 27, 2014 June 27, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေ.ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတို. သိသင့်သော ၄ နှစ်ပြည့်ဗီဇာအကြောင်း
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားကြသူ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ အနေနှင့် ၄ နှစ်တာ သက်တမ်းကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ယခုအခါ နောက်ထပ် သက်တမ်း (၂) နှစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရမှ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တရားဝင် သက်တမ်းတိုးပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ထိုသုိ. မိမိတို.နေထိုင်ခွင့် (ဗီဇာ) သက်တမ်းတိုးရာတွင် အထူးသတိပြုသင့်သည့်အချက်များ ( ၅ ) ချက်ရှိပြီး မှန်ကန်ပြည့်စုံရန် အထူးဂရုပြုဖို.လိုအပ်ပါသည်။
၁။ Passport မူရင်း
၂။ မိမိ ဓါတ်ပုံ(၄) ပုံ
၃။ အလုပ်ရှင် ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( ဘတ်ပရာချာချွန် နိုင်ကျန်.)
၄။ အလုပ်ရှင် ၏ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (ထဗီယမ်ဘန်. နိုင်ကျန်.)
၅။ အလုပ်ရှင် ၏ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ ( ခိုတာ) (ယခုနှစ်အတွက်ဖြစ်ရပါမည်)
လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် အလုပ်ရှင်များ၏ ပါဝင်မှု. အားနည်းခြင်း လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ဆင့်အတွက် နားလည်မှု.မရှိခြင်းတို.ကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမား အများစုမှာ ကြားခံ ပွဲစားများ(အေးဂျင့်များ) မှတဆင့် ပြုလုပ်နေကြရပြီး ကုန်ကျစရိတ်များမှာလဲ နယ်မြေဒေသ အလိုက် ၆၅၀၀ ဘတ် / ၇၀၀၀ ဘတ်/ ၇၅၀၀ ဘတ် /၈၅၀၀ဘတ်/ ၁၂၀၀၀ ဘတ် စသဖြင့် ကွာခြားသည်ကိုတွေ.ရှိရသည်။
အမှန်တကယ် မှာမူ မိမိ၏အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ပါက ၄၀၀၀ ဘတ် ခန်.သာ ကုန်ကျနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်၇န် အခက်အခဲများ ရှိသောကြောင့် ကြားခံပွဲစားများကောက်ခံသည့် ငွေကြေးကိုပေးကာ ပြုလုပ်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို.ပြုလုပ်ရာတွင် အချို. မြန်မာအလုပ်သမားများမှာ အချက် (၅)ချက်အရ အချက် ၃/၄/၅ ကို မိမိအလုပ်ရှင်ထံမှ တောင်းယူခြင်းမရှိပဲ (သို.) အလုပ်ရှင်များ မှ မပေးသောကြောင့် ကြားခံ ပြုလုပ်ပေးသူများအား ၀ကွက် အပ်လိုက်ရသည်လဲရှိသည်။
ှ္ကုဤတွင် ကြားခံပြုလုပ်ပေးသူများ မှ အငှားအလုပ်ရှင် နှင့် အငှား နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားခေါ်ယူခွင့် (ခိုတာ) တို. ကို အပိုငွေကြေး ကောက်ခံလျှက် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။
ထိုသုိ.ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ မှာ အလုပ်ရှင် အမည် ၊ နေရပ် မတူညီခြင်း ။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မတူညီခြင်း တို. ဖြစ်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ မိမိ အလုပ်ခွင်တွင်း ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ ဖမ်းဆီးခံရနိုင်သည်ကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
* အမှန်တကယ် ပြုလုပ်သင့်သည့်အချက်များမှာ *
၁။ မိမိအလုပ်ရှင်အား ခွင့်တောင်းလျှက် သဘောတူညီချက်ရယူပါ
၂။ မိမိအလုပ်ရှင်အတွက် နိုင်ငံခြားသားခေါ်ယူခွင့်လျှောက်လွှာ အား အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်မပြုလုပ်ပါက ကြားခံပွဲစားမှ တဆင့် မှန်ကန်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။
* အလုပ်ရှင် အတွက် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား ခေါ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာတောင်းခံရန်လိုအပ်ချက်မှာ *
၁။ အလုပ်ရှင်၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( ဘတ်ပရာချာချွန် နိုင်ကျန်.)
၂။ အလုပ်ရှင်၏ အိမ်ထောင်စုမှတ်တမ်း (ထဗီယမ်ဘန်. နိုင်ကျန်.)
၃။ အလူုပ်အမျိုးအစားအလိုက် စာရွက်စာတမ်းများ
(က) ရော်ဘာခြံလုပ်သား ဆိုလျှင် ဥယျာဉ်ခြံပိုင်ဆိုင်မှု.အထောက်အထား (ထဗီယမ်ထိဒင်း)
(ခ ) ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားဆိုလျှင် ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိထားသည့် အဆောက်အဦးပုံစံ
(ဂ ) ပုဇွန် မွေးမြူရေး လုပ်သားဆိုလျှင် ပုဇွန်ကန် ပိုင်ဆိုင်မှု. အထောက်အထား
စသဖြင့် အလုပ်ရှင်၏ အထောက်အထားများအား အလုပ်ရှင်၏ လက်မှတ်နှင့်အတူ ပူးတွဲပြီး နယ်မြေ အလုပ်သမားဦးစီးဋ္ဌာန ရုံးများတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသုိ. ပြုလုပ်မှသာ မိမိ အလုပ်ရှင်အမည် နှင့် မိမိအလုပ်အကိုင် မှန်ကန်မည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အခါ အရေးယူခြင်း ခံရမည်မဟုတ်ပါ။
* သက်တမ်းတိုးပြီးပါက ရရှိလာမည့် စာရွက်စာတမ်းများ *
၁။ မိမိPassport စာအုပ်ထဲတွင် အလုပ်ရှင်အမည် နေရပ် ဖြည့်စွက်ထားသည့် NAN-LA VISA စာမျက်နာ
၂။ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်အတွက် ငွေပေးချေပြီးကြောင်း ပြေစာ စာရွက် တို.ကိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြီး ပါက သက်တမ်း တိုးပြီးသော မိမိ Passport နှင့် မိမိ Work Permit အားလက်ခံရရှိပြီးပါက မိမိနေထိုင်ရာ နယ်မြေ ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေး အာမခံ (ဆေးရုံဘတ်) ပြုလုပ်ပြီး ဆေးရုံမှ ထုတ်ပေးသော သွေးစစ်လက်မှတ် နှင့် မိမိ Passport မိတ္တူ ၊အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ် ငွေချေပြေစာWork Permit အတူ နယ်မြေ အလုပ်သမားရုံးသို. ပူးတွဲတင်ပြပြီး Work Permit စာအုပ် အားတောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄ နှစ်ပြည့် သက်တမ်းတိုး လုပ်ငန်းစဉ် အနေနှင့် စာရွက်စာတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှင့်ပြုလုပ်ပါက ကြာမြင့်ချိန် မှာ (၁၀) ရက်မှ (၁၅) ရက်အတွင်း ပြီးဆုံးပါသည်။
( မကြာမှီ ထိုင်းရောက်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ (လူသစ်) အတွက် ထိုင်းအစိုးရမှ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် များထုတ်ပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။)
ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်းခရိုင်မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ one stop service center သို့ 
one stop service center တွင်ဗီဇာ ၄နှစ်ပြည့်နေထိုင်ပြီးယာ
သမားများအားမိမိအလုပ်ရှင်နှင့်တစ်ဦးလျှင် ၇၅၀၀ ဘတ်နှုံးကောက် Continue reading “#MYANMAR #ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်းခရိုင်မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ #one #stop #service #center” →
#BURMA #MYANMAR #NAY #MYO #ZIN #ယနေ့ တာမွေ တရားရုံးသို့ တရားရင်ဆိုင်ရန် ကြွရောက်လာသော ဆရာတော် သံဃာတော်များ
ယနေ့ တာမွေ တရားရုံးသို့ တရားရင်ဆိုင်ရန် ကြွရောက်လာသော ဆရာတော် သံဃာတော်များ နှင့် ပရိတ်သတ် ၊ ပြည်သူလူထု တို့ အဆင်ပြေစေရေး၊ ဆရာတော်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးတွဲပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း ………………….. ဆရာတော်များ တရားရုံးသို့ ဆိုက်ရောက်ခိုက် ဆရာတော်များ နားနေရန် နှင့် အအေး သုံးဆောင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသော နားနေခန်းတွင် ဆရာတော်များ နှင့် လူငယ်ထုခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဂျင်မီတို့က ဆရာတော်များနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုနေချိန်တွင် အဆိုပါ အခန်း အတွင်း ရှိလုံခြုံရေး တာဝန် ရှိသူ ဆိုသော လူနှစ်ဦးက မိမိတို့က ကြောင်းကျိုးပြ တားမြစ်ပါသော်လည်း လက်မခံပဲ ဆက်လက် ရိုက်ကူးနေသဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာ တင်းမာစွာဖြင့် တားမြစ်ခဲ့ရသည်။ ဆရာတော်များ ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက် တားမြစ်ခဲ့ရသည် အထိ တင်းမာမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကပင် မသိသော လျို့ဝှက် ချထားသည့် ရင်ထိုး KEMPO Security စာသားပါ ရင်ထိုး တံဆိပ်လေးများ တပ်ဆင်ထားသည့် အဆိုပါ လူနှစ်ဦး နှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ အထူး ပင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
သတင်းဂျာနယ်များ တွင် သိသာထင်ရှားလှသည့် ကာတွန်းသရုပ်ဖေါ်ကွက်များဖြင့် ပြည်သူများ နှစ်သက် သဘောကျသော ကာတွန်းဆရာ ကာလူး အား ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပတ် လိပ်စာ တို့ အား သိရှိသူများမှ ဖေါ်ပြပေးပါရန် လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့လူမှုဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေး အသင်းသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့ထားသော ကာတွန်းဆရာ ကာလူး အတွက် ဂုဏ်ပြု စပို့ရှပ် အကျီ၊ ဘောင်းဘီများကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပေးအပ် ဂုဏ်ပြုချီးကျူး စကားဖြင့် ဆရာကာလူးအား ဂုဏ်ပြုလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာ့လူမှုဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားရေး အသင်း
ကျနော် ထောင်မှ ရက်စေ့သောကြောင့် လွတ်မည် ဆိုသော အခါ ရဲဘော်ရဲဘက်များ ဖြစ်သော ဦးဇော်ဝင်း။ ကိုတင်မောင်ကြည် နှင့် ကိုထင်ကျော်တို့ ကို စိတ်မကောင်းစွာ သွားနှုတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်ဝန်ကို ထမ်း ခေတ်လမ်းကို လျောက်နေသူ အချင်းချင်း ထောင်ထဲ ၀င်ချည် ထွက်ချည်၊ ကြုံလိုက်၊ သူ့ရှိတာ ကိုယ်စား။ ကိုယ့် ရှိတာ သူကျွေး။ ယခု ထောင်ထဲတွင် ကျန်နေခဲ့ရှာသော ဦးဇော်ဝင်း ( ကျနော့် ညာဘက်နဘေး ထိုင်နေသူ) မှာ အသက်က ခြောက်ဆယ်ကျော် သွေးတိုးရောဂါ နှင့် မကြာမကြာ သွေးကျဆေး စားနေရရှာသူ။ သူ့လို သက်ကြီး ရွယ်အို ကိုပင် မရှောင် အစိုးရအား အယုံအကြည်မရှိဟုပြောမိသည်နှင့်ပင် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်က ထောင်ဒါဏ်ခြောက်လ ချမှတ်ခြင်းကို သူတို့ ခံယူနေရသည်။ ထို့ပြင် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မကြာမှီ ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိသည်ဟု ပြည်ထဲရေး တာဝန်ရှိသူတဦးက လွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုခြင်းကို လက်ရှိ အကျဉ်းစံနေရသူများ အားလုံးက ကြိုဆိုကြသော်လည်း။ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မကြာမှီပေးရန်ရှိသည် ဆိုသော သတင်းကို အမှီပြုပြီး။ လက်ရှိ ပြင်ပတွင် တရားဥပဒေ ဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုများ၊ လိမ်လည်ခိုးဝှက်မှုများ နှင့် ရပ်ရွာတည်ငြိမ်စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်စေမည့် ကျူးလွန်လိုသူများကို အခွင့်အလမ်း ကြိုတင်ဖန်တီးပေးထားသည့်နှယ် စေ့ဆော်မှုများ ဖြစ်နေစေသည်ဟု ကျနော်က သုံးသပ်မိပြီး အမြန်ဆုံး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ပေးစေချင်မိသည်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မပေးမှီ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် ထမ်းဆောင်ရသည့် ပြည်ထဲရေး ၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်တို့ကို တိကျသော နည်းဥပဒေများဖြင့် ပြင်ဆင်ထိန်းကွပ်ပေးပြီး အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကာ နိုင်ငံသားတို့ အပေါ် သံသယ အကျိုးကို ခံစားခွင့် မပေးပဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုများ၊ မပြုလုပ်နိုင်ရေး စနစ်တကျ ပြင်ဆင်သင့်သလို၊ လက်ရှိထောင်တွင်း အကျဉ်းကျခံနေရဆဲ အကျဉ်းသားများ အနက်မှ အမှန်တကယ် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သော အလုပ်ကိုင်မဲ့ နိုင်ငံသားများကို အလုပ်အကိုင် အသက်မွေးမှုနည်းလမ်း အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးစီစဉ်ပေးပြီးမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရေးနှင့် အပျင်းပြေ လူသတ်တတ်သော စိတ်ရှိသည့် လူသတ်လက်ယဉ်သော အကျဉ်းသားများကိုဖြင့် စနစ်တကျ စိတ်ဓါတ်ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ နောင်တ တရားရသည်အထိ စီစဉ်ထိန်းသိမ်း သင့်ပါသည်။ ဟု လတ်တလော တွေးမိသော အကျဉ်းစံဘ၀ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု အတွေးများကို ဖေါ်ပြလိုက်ရပါသည်။